दसैं भनेर जथाभावी नखानुस्, फूड पोइजनिङ होला ! - Arthatantra.com
दसैं भनेर जथाभावी नखानुस्, फूड पोइजनिङ होला !
काठमाडौं । दसैं त हो नी भनेर जथाभावी खाँदा र आवश्यक भन्दा बढी खाँदा यो बेला धेरै मानिस बिरामी पर्छन । अझ कतिपयले त यो दसैंमा खाने हो भनेर महिनौंदेखि खानेकुरा जोहो गरेर राखेका हुन्छ । यस्ता खानेकुराबाट फूड पोइजनिङको जोखिम उच्च हुने गरेको छ ।
फुड पोइजनिङकाट बच्न खानालाई सफा गरेर राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। खाना बनाउनुअघि, खानु र खुवाउनुअघि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ। पकाएका खानेकुराहरु छोपेर राख्ननुपर्छ भने एकैपटक धेरै खानेकुरा खानु हुँदैन् ।
प्याकेजिङ खाना, केमिकलयुक्त खानेकुरा सकेसम्म नखाएको राम्रो । फुड पोइजनले दीर्घकालीन असर नगरेता पनि यसले स्वास्थ्यमा भने नकारात्मक असर पुर्याउछ।
अदुवा चियामा थोरै मह मिसाएर दिनमा कम्तीमा तीनपटक पिउँदा फुड पोइजनिङबाट आराम मिल्छ । नरिवल पानी सेवन गर्दा औषधिको काम गर्छ । तुलसीको पातलाई उमालेर मह मिसाएर पिउँदा राहत मिल्छ।
एक टुक्रा लसुन पानीमा राखेर पिउँदा ब्याक्टेरियल संक्रमणबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । एक चम्चा जीरा पिसेर खानामा प्रयोग गरेमा फूड प्वाइजनबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । फूड प्वाइजनमा स्याउ र केराको सेवनएकदमै लाभदायक मानिन्छ । यस्तो बेला पानीको सेवन बढी मात्रामा गर्दा फाइदाजनक हुन्छ ।
वि.सं.२०७८ असोज २८ बिहीवार १४:४९ मा प्रकाशित
अघिल्लाे दशैंको विदामा पनि लोकसेवाले खुलायो जागिर, कहिलेसम्म कसरी दिने आवेदन ?
पछिल्लाे गण्डकीले बनायो एकै वर्ष ११५ झोलुंगे पुल, हालसम्म कति बने ?